Disneyland ပဲရစ် ခရီးသွားသတင်း
Disneyland ၎င်းသည်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင် "ဘဏ်ခွဲများ" တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လူတို့သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပန်းခြံများ၌ပျော်မွေ့ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့အမြဲတမ်းသွားစရာမလိုတော့ပေ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ကဲ့၊ အမေရိကရှိပန်းခြံများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Disneyland Paris သို့သွားရောက်ပါ။
2 Disneyland Paris သို့သွားရောက်ပါ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပရှိပန်းခြံများတည်ဆောက်ခြင်း၏စိတ်ကူးသည်ထိုအချိန်ကဤနေရာတွင်ရှိခဲ့သောပန်းခြံများ၏အောင်မြင်မှုအပြီး ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်ဥရောပဘာသာပြန်များသည် ၁၉၉၀ အစောပိုင်းတွင်သာရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာက Disneyland Tokyo ၏အလှည့်ဖြစ်ပြီးဥရောပတွင်မည်သည့်ဥရောပထုတ်ဝေမှုကိုတည်ဆောက်မည်ကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်အားဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်နေရာနှစ်ခုမှာစပိန်နှင့်ပြင်သစ်ဖြစ်သည်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးသည်ခရီးသွား were ည့်သည်များဖြစ်ကြသည်။ အဲဒါကိုပြောစရာမလိုပါဘူး ပြင်သစ်အနိုင်ရခဲ့သည် အခြေအနေကအငြင်းပွားစရာမရှိသော်လည်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနယ်ချဲ့ဝါဒလား။ နှင့်အရာမျိုး။
ဘာဖြစ်ဖြစ်, Euro Disney Resort သည် ၁၉၉၂ တွင်တံခါးဖွင့်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှာခက်ခဲပြီးကုမ္ပဏီများမျှော်လင့်ထားသည့်အရေအတွက်ကိုမလည်ပတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းပန်းခြံ၏အမည်နှင့်အပြောင်းအလဲသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းနည်းနည်းသာပြောင်းလဲလာပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ Disney Land Paris ၎င်းသည်၎င်း၏အစ်ကိုများပင်လျှင်အဝေးကြီးမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုဖမ်းမိခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ရနိုင်သကဲ့သို့ဒစ္စနေးနှင့်နီးကပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Disneyland Paris သို့သွားရောက်ပါ
အတွင်းပိုင်းကွဲပြားခြားနားသောဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများရှိပါသည်: ဖြစ်ပါတယ် Disneyland Park၊ Walt Disney စတူဒီယိုပန်းခြံနှင့် Disney Village။ အတွင်းပိုင်း၌တစ် ဦး ရှုပ်ထွေးသောလည်းရှိပါသည် Disney ဟိုတယ်ခုနစ်လုံး နှင့်အခြားဆက်စပ်ဟိုတယ်ခြောက်ခုကုမ္ပဏီကစီမံခန့်ခွဲမရ။
ပန်းခြံ Chessy Mame la Vallèeတွင်တည်ရှိသည် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်ရောက်ရှိရန် RER ကွန်ယက်နှင့်မြန်နှုန်းမြင့် TGV နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောရထားကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဆိုပြင်သစ်ကနေလန်ဒန်ကိုသွားနိုင်တယ်။
ဒီတော့ဒီမှာလုပ်နိုင်တာနဲ့စကြရအောင်။ On Disney Land Paris လက်တဆုပ်စာစိတ်လှုပ်ရှားစရာများရှိပါသည်။ Mickey ၏ Philhar မှော်ဒါဟာသေးငယ်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ Adventure Isle, Alicia's Curious Labyrinth, Autopia, Big Thunder Mountainစက်တင်ဘာ Nains၊ Little Circus၊ Discovery Arcade၊ Dumbo၊ Frontierland Playaraound၊ အင်ဒီယားနားဂျုံးစ်နှင့်အန္တရာယ်ဗိမာန်တော်Robinson's Cabin၊ Dragon's Cavern၊ Sleeping Beauty Gallery၊ Sleeping Beauty's ရဲတိုက်၊ Lancelot's Carousel၊ Nautilus နက်နဲသောအရာ, Pinocchio, Orbitron ၏ခရီးစဉ်, ကာရစ်ဘီယံ၏ပင်လယ်ဓားပြများ နှင့်များစွာသောအခြား။
ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုစီသည်သင့်အားမိသားစုတစ်ခုအနေနှင့်ကောင်းမွန်သောအချိန်ရရန်အတွက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်အချို့နေရာများတွင်အနိမ့်အမြင့်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သုံးဆွဲဆောင်မှုနှစ်ခုအဘို့ Star Wars။ သောကြောင့်သောဒစ္စနေးပဲရစ်လေးစားမှုနှင့်အတူ Walt Disney စတူဒီယိုပန်းခြံတွင်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုများရှိသည် ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိကြီးစွာသောရုပ်ရှင်နှင့်ဆက်စပ်သော။ ထုတ်လုပ်မှုဇုန်ငါးခုရှိပါတယ်။
ဒီဆွဲဆောင်မှုတွေထဲမှာငါတို့ရှိသည် Crush ရဲ့ Coaster, အဒစ္စနေးစတူဒီယို 1, Les Tapis Volants, RatatouilleSlinky Dog Zigzag Spin Twilight ဇုန်အကြမ်းဖက်မှုမျှော်စင်, Toy Soldiers လေထီးများနှင့်စတူဒီယို Tram ခရီးစဉ်။ ယခုအဘို့, ရဲ့ထည့်သွင်းကြကုန်အံ့ အဆိုပါ Advengers နှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်.
ဟုတ်ပါတယ်, ပန်းခြံအတွင်း၌သင်ပျော်မွေ့နိုင်သည် ဖြစ်ရပ်များနှင့်ချီတက်ပွဲဥပမာ၊ Mickey၊ Disney Princesses, Winnie, Pluto (သို့မဟုတ်) Dark Vather တို့ကိုတွေ့ဆုံနိုင်သည်။ ဤ "အစည်းအဝေးများ" ကိုနေ့အချိန်အမျိုးမျိုးတွင်စီစဉ်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာပန်းခြံ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်လေ့လာရန်နှင့်သင်စိတ်ဝင်စားဆုံးသူများအားမှတ်ချက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
လာရောက်လည်ပတ်တဲ့နာရီကဘာလဲ။ နှစ် ဦး စလုံးဖျော်ဖြေရေးဒေသများဖွင့်လှစ် နံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၆:၃၀ အထိနောက်ပြန်လမ်းတွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမသွားမီစစ်ဆေးရန်အဆင်ပြေသည်၊ အကြောင်းမှာအချို့သောဆွဲဆောင်မှုများတွင်အခြားအချိန်ဇယားများရှိသည်။
ဘယ်လက်မှတ်အမျိုးအစားတွေရှိပါသလဲ။ အဲဒီမှာ တစ်နေ့တာလက်မှတ်များ, လွှဲပြောင်းနှင့်ဖြတ်သန်းနှင့်အတူ multi- နေ့ကလက်မှတ်တွေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နေ့စဉ်ဝင်ရောက်မှုသည် ၁၂ နှစ်ကျော်အရွယ်လူကြီးတစ် ဦး အတွက် ၈၇ ယူရိုနှင့် ၃ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်ကြားကလေးများအတွက် ၈၀ ဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေ့ရက်အတွက်မဆိုအဆိုပါလက်မှတ်သည်တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိသည်။ ထို့နောက်အွန်လိုင်းပြသသောပြက္ခဒိန်အရအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အပြာဖြင့်ဖော်ပြသောအခြားလက်မှတ်အမျိုးအစားများနည်းနည်းသက်သာသည်။ အသစ်နှစ်စဉ် 'passes' လည်းရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရက်ပေါင်းများစွာတရားဝင်တဲ့လက်မှတ်ဟာစီးပွားရေးအရအဆင်ပြေပါတယ်။ ဤအမျိုးအစားတွင်ဒစ္စနေးပန်းခြံနှစ်ခုသို့သွားနိုင်သည်။ ၂ ရက်၊ ၃ ရက်နှင့် ၄ ရက် ရှိ၍ အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး လျှင်ယူရို ၈၄၊ ၅၀၊ ၇၀၊ ၃၃ နှင့် ၆၂.၂၅ စျေးနှုန်းရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Gard du Nord ဘူတာမှ Opera သို့မဟုတ်Châteletမှတစ်ရက်လျှင် ၁ ပန်းခြံနှင့် ၁ ရက်၊ ၂ ပန်းခြံများမှ ၁၈၄ ယူရိုနှင့် ၂၂၄ ယူရို (အရွယ်ရောက်သူနှစ် ဦး) မှထွက်ခွာသောဘတ်စ်ကားများပေါ်တွင်ပြောင်းရွှေ့ရန်လက်မှတ်များရှိသည်။
ထိုလက်မှတ်တွင်လည်း Eiffel Tower မှ ၁ ရက်၊ ၁ ဥယျာဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ် ၁၈၄ နှင့် ၂၂၄ ယူရိုအသီးသီးအတွက်တူညီသောနေရာမှထွက်ခွာရန် ၁ ရက်၊ ၂ ပန်းခြံများရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ဒစ္စနေးပန်းခြံကိုလည်ပတ်ရန်စိတ်ကူးသည်တစ်နေ့တာကိုသွားပြီးဖြုန်းရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စော။ သွားပြီးတစ်နေကုန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ အဲဒီအတွက် တူညီသောပန်းခြံအတွင်း၌စားသောက်ဆိုင်မြောက်မြားစွာရှိသည်ဒစ္စနေးကျေးရွာတွင်တည်ရှိသော IMAX ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်စတိုးဆိုင်များတွင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုယူဆောင်လာသည်။
သငျသညျအရာအားလုံးကိုပရိုဂရမ်ရှိသည်ဖို့လိုသူမြား၏တ ဦး တည်းဖြစ်လျှင်ထို့နောက် အစားအစာအစီအစဉ်များ Disneyland Paris ၎င်းတို့သည်သင့်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကကြိုတင်အစားအစာများကိုစီစဉ်နိုင်ပြီး ကြိုတင်၍ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးဘတ်ဂျက်ကိုသတိထားမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားသောအစားအစာအစီအစဉ်များရှိပြီးအချို့သောအစီအစဉ်များတွင် Disney Character နှင့်အတူစားခြင်းပါဝင်သည်။ ဤအစီအစဉ်များကိုနှစ်သက်ရန်အတွက်သင်ကြိုတင်မှာကြားထားရန်လိုအပ်သည် (ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ဝက်၊ full board၊ ဘူဖေးစသည်တို့) ကိုရွေးချယ်ရမည်။ ဟိုတယ်နှင့်ဗီလာတွင်သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါကူပွန်ကိုလက်ခံရရှိသည်၊ သင်စားရန်နေရာ ၂၀ နေရာရှိသည်။
စျေးနှုန်းများ? မင်းမှာaဘုတ်အဖွဲ့ဝက်စီမံကိန်း (နံနက်စာ၊ ကြိုတင်ဘွတ်ကင်တစ်ညလျှင်လူတစ် ဦး စီအတွက်မုန့်ညက်) အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး လျှင် 39 ယူရိုကနေ o 59 ယူရိုကနေအပြည့်အဝဘုတ်အဖွဲ့ စံငါးစားသောက်ဆိုင်အစီအစဉ်။ သင်စာရင်းထဲသို့စားသောက်ဆိုင်များများများများများထည့်လေလေ၊ ဘုတ်အဖွဲ့အပြည့်အတွက် ၁၂၀ ယူရိုပိုများလေဖြစ်သည်
အပြီးသတ်ဖို့၊ သင် Disneyland Paris ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဒီအားသာချက်ကိုရယူနိုင်ပါတယ် ofertas၂၀၂၀ မတ်လ ၄ ရက်မတိုင်မီသင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပြီးAprilပြီ ၂ ရက်မှနိုဝင်ဘာ ၁ ရက်အထိကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်လျှင် ၂၅% လျှော့စျေး + အခမဲ့ဝက်ဘ်ဘုတ်ကိုခံစားရမည်။ ဆောင်းရာသီတွင်နေထိုင်ခွင့်သည် ၃၀% လျှော့စျေးရှိသည်။ သင်မတ်လ ၃၁ ရက်မတိုင်မီသင်စာအုပ်ဝယ်လျှင်ကလေး၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူလူကြီးလက်မှတ်ရှိသည်။ ၏အားသာချက်ကိုယူ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ပဲရစ် » Disney Land Paris